Nhanganyaya ye organic fetiraiza yekugadzira mutsara - YiZheng Heavy Machinery Co, Ltd.
Groove Rudzi Composting Turner Muchina ndiyo inonyanya kushandiswa aerobic Fermentation muchina uye manyowa wekushandura michina. Inosanganisira goroji pasherufu, kufamba munzira, simba rekuunganidza mudziyo, kutendeuka chikamu uye kuchinjisa chishandiso (chinonyanya kushandiswa kune akawanda-tangi basa). Chikamu chinoshanda che compost Turner muchina chinotora huturu hwekutenderera, hunogona kusimudzwa uye husingasimudzike. Rudzi runosimudzwa runonyanya kushandiswa muzviitiko zvebasa neupamhi hwekutendeuka husingasviki mamita mashanu uye kudzika kwakadzika kusingasviki 1.3 mita.
Iyo dhizaini dhizaini uye kugadzirwa kweyedu yese organic fetiraiza yekugadzira mutsara. Iyo yekugadzira mutsara michina inonyanya kusanganisira maviri-axis musanganisi, nyowani organic fetiraiza granulator, roller roller, chinotenderera chinotonhorera, roller roller sieve muchina, yakatwasuka cheni crusher, bhandi conveyor, otomatiki yekupakata muchina uye zvimwe zvekubatsira michina.
Organic mafetiraiza anogona kugadzirwa nemethane masara, marara ekurima, zvipfuyo uye huku yehuku uye tsvina yemasipareti. Tsvina yemanyowa iyi inoda kumwe kugadziriswa isati yashandurwa kuita mafotereza ekushambadzira ehupfumi hwekutengesa. Iko kudyara mukushandura marara kuita hupfumi kwakakosha chose.
Organic fetiraiza yekugadzira mutsara yakakodzera kune:
- Kugadzira yemombe yemombe fetiraiza
- Kugadzirwa kwevhu remupfudze remombe
-Kugadzira yenguruve mupfudze
- Kugadzira huku uye dhadha mupfudze wehupenyu
- Makwai manyowa anogadzira fetiraiza kugadzira
- Organic kugadzira fetiraiza mushure memasiparati tsvina tsvina.
Kushanda kweGroove Type Composting Turner Machine
1. Inoshandiswa mukuvirisa uye kubvisa mvura mashandiro muzvirimwa zve organic fetiraiza, michina yemanyowa yemiti, sludge mafekitori emarara, mapindu ekurima gadheni uye masango ehwahwa.
2. Inokodzera kuomesa kweaerobic, inogona kushandiswa pamwe chete nemakamuri ekuvirisa ezuva, matangi ekuvirisa uye mashifita.
3. Zvigadzirwa zvakawanikwa kubva kumusoro-tembiricha eerobic Fermentation inogona kushandiswa kugadzirisa ivhu, kurima gadheni, chifukidziro chevhu, nezvimwe.
Zvinhu Zvakakosha Kudzora Kompost Maturity
1. Mutemo wekabhoni-nitrogen chiyero (C / N)
Iyo yakakodzera C / N yekuora kwezvinhu zvakasikwa neakawandisa ma microorganis angangoita 25: 1.
2. Kudzora kwemvura
Iko kusefa kwemvura kwe compost mukugadzirwa chaiko inowanzo kudzorwa pa50% ~ 65%.
3. Kompositi yekudzivirira mweya
Kupepereswa nemweya weoksijeni chinhu chakakosha pakubudirira kwemanyowa. Inowanzotendwa kuti oxygen mumurwi inokodzera 8% ~ 18%.
4. Kudzora kwekushisa
Kupisa kwakakosha chinhu chinokanganisa mashandiro akanaka emakemikari emakomputa. Iyo yekudziya tembiricha yeakanyanya-tembiricha manyowa ndeye 50-65 degrees C, inova ndiyo nzira inowanzo shandiswa parizvino.
5. Acid munyu (PH) kudzora
PH chinhu chakakosha chinokanganisa kukura kwehutachiona. PH yemusanganiswa wemanyowa inofanira kuva 6-9.
6. Kudzora kunhuwa
Parizvino, mamwe majekiseni anoshandiswa kudzora mweya.
1, Animal mupfudze: huku manyowa, nguruve mupfudze, hwai mupfudze, mombe mupfudze, bhiza mupfudze, tsuro mupfudze, etc.
2. Maindasitiri marara: mazambiringa, vhiniga slag, mufarinya zvisaririra, shuga zvisaririra, biogas tsvina, fur fur residue, nezvimwe.
3. Tsvina yezvekurima: mashanga ezvirimwa, furawa yesoya, hupfu hwekotoni, nezvimwe.
4. Tsvina yemumba: marara emukicheni
5. Sludge: dhorobha sludge, rwizi sludge, firita sludge, nezvimwe.
Iyo yekutanga kugadzirwa kwemaitiro e organic fetiraiza inosanganisira: kukuya mbishi mbichana → kuvirisa → kusanganisa kwezvinhu (kusanganisa nezvimwe organic-inorganic zvinhu, NPK≥4%, organic chinhu ≥30%) → granulation → kurongedza. Ongorora: iyi tambo yekugadzira ndeye yekureva chete.
Isu hatigone chete kupa yakakwana organic fetiraiza yekugadzira mutsara sisitimu, asi zvakare ipa imwechete chishandiso mukuita zvinoenderana nezvinodiwa chaizvo.
1. Mutsetse wekugadzira we organic fetiraiza inotora tekinoroji yekugadzira yepamusoro, iyo inogona kupedzisa kugadzirwa kwe organic fetiraiza panguva.
2.Tora patent patent yakasarudzika yakakosha yeiyo organic fotereza, ine yakakwira granulation chiyero uye yakakwira chidimbu simba.
3. Izvo zvigadzirwa zvakagadzirwa ne organic fetiraiza zvinogona kunge zvekurima zvekurima, zvipfuyo uye huku yehuku uye tsvina yemumadhorobha, uye izvo zvigadzirwa zvakagadzirwa zvinoenderana.
4. Kugadzikana mashandiro, ngura kuramba, kupfeka kuramba, kushomeka kwesimba kushandiswa, hupenyu hurefu hwebasa, kugadziriswa kuri nyore uye mashandiro, nezvimwe.
5. Kubudirira kwepamusoro, zvakanaka zvehupfumi, zvishoma zvinhu uye regranulator.
6. Iyo yekugadzira mutsara gadziriso uye zvinobuda zvinogona kugadziriswa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi.
Organic fetiraiza yekugadzira michina inosanganisira yekuvirisa michina, miviri-axis musanganisi, nyowani organic fetiraiza granulation muchina, roller roller, dhiramu inotonhorera, dhiramu yekuongorora muchina, silo, otomatiki kurongedza muchina, yakamira cheni crusher, bhandi conveyor, nezvimwe.
Organic fetiraiza kugadzirwa maitiro:
1) yekuvirisa maitiro
Drough-mhando dumper ndiyo inoshandiswa zvakanyanya kuvirisa michina. Iyo grooved stacker ine yekuvirisa tangi, yekufamba nzira, simba system, yekumisikidza mudziyo uye yakawanda-lot system. Chikamu chinopidiguka chinotyairwa neanemberi ma roller. Hydraulic flipper inogona kusimuka uye kudonha zvakasununguka.
2) granulation maitiro
Rudzi rutsva rwe organic fetiraiza granulator inoshandiswa zvakanyanya mu organic fetiraiza granulation. Iyo yakakosha granulator yezvinhu zvakasvibirira senge tsvina yemhuka, michero inoora, maganda, miriwo mbishi, fetiraiza yakasvibirira, fetiraiza yegungwa, fetiraiza yepurazi, marara matatu, tupukanana nezvimwe zvinokonzeresa marara. Iine zvakanakira yakakwira granulation mwero, kugadzikana mashandiro, yakasimba midziyo uye hwakareba hupenyu hwebasa, uye isarudzo yakanaka yekugadzira organic organic. Dzimba dzemuchina uyu dzinoshandisa isina musono pombi, inova yakasimba uye haina kuremara. Pamwe pamwe nekuchengetedza dhoko dhizaini, mashandiro emuchina aya akatsiga. Iko kusimba kwesimba kweiyo nyowani organic fetiraiza granulator iri pamusoro pane iyo ye diski granulator uye dhiramu granulator. Saizi yezvinhu inogona kugadziriswa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi. Iyo granulator inonyanya kukodzera kune yakananga granulation yemarara marara mushure mekuvira, ichichengetedza iyo yekuomesa maitiro uye ichideredza zvakanyanya kugadzirwa kwemitengo.
3) kuomesa uye kutonhora maitiro
Icho chidimbu chemanyoro chemukati mushure mekukwikwidzwa neiyo granulator yakakwira, saka inoda kuomeswa kusangana neyakajairika yemvura. Iyo yekuomesa inonyanyo shandiswa kuomesa zvidimbu nehumwe hunyoro uye hwehukuru hwemasanganiswa mukugadzirwa kwe organic fetiraiza yakasanganiswa fetiraiza. Iyo tembiricha tembiricha mushure mekuomesa yakati rebei, uye inofanira kutonhodzwa kudzivirira fetiraiza kubva mukuumbana. Iyo inotonhorera inoshandiswa kutonhodza zvidimbu mushure mekuomesa uye inoshandiswa musanganiswa ne rotary dryer, iyo inogona kuvandudza zvakanyanya kutonhodza kushanda, kudzikisa kushanda kwesimba, kuwedzera goho, kuwedzera kubvisa hunyoro hwezvimedu uye kudzikisira tembiricha yefetireza.
Mukugadzira, kuitira kuti uve nechokwadi chekufananidzwa kwechigadzirwa chakapedzwa, zvidimbu zvinofanirwa kuongororwa zvisati zvaiswa. Roller sieving muchina wakajairika sieving midziyo mukugadzira nzira yemubatanidzwa fetiraiza uye organic fetiraiza. Iyo inoshandiswa kupatsanura zvigadzirwa zvakapedzwa uye zvisiri-zvinowirirana zviyero uye nekuwedzera kuwana kupatsanurwa kwezvakagadzirwa zvigadzirwa.
5) kurongedza maitiro
Mushure mekunge muchina wekurongedza wamiswa, iyo giravhiti feeder inotanga kushanda, inotakura zvinhu mukati mehuremu hopper, yozviisa muhombodo kuburikidza nehuremu hopper. Kana huremu hwasvika pakukosha kukosha, giravhiti feeder inomira kumhanya. Anoshanda anotora zvinhu zvakapakurwa kana kuisa bhegi rekurongedza pane rinotakura bhandi kumuchina wekusonesa.